Dowladda Faransiiska oo codka kalsooni darrada wajaheysa - BBC Somali
Dowladda Faransiiska oo codka kalsooni darrada wajaheysa
Image caption Dalkaasi waxaa habeen kastaa ka dhici jiray dibadbxayo ka dhan ah isbadalka lagu sameynaya xeerka shaqaalaha.
Xukuumadda Faransiiska ayaa maanta oo khamiis ah wajahaysa codka kalsooni kala noqoshada ee baarlamaanka, kaddib markii ay khasab ku meel marisay xeer muran dhaliyey oo ku saabsan isbeddel lagu sameeyo shuruucda xagga shaqada.
Bannaanbaxyo looga horjeedo xeerka ayaa ku dhawaad habeen walba dhacayey tan iyo bishii March, ayadoo maantana la filayo in ay kuwo kale dhacaan.
Dibadyaxyada ka dhanka ah isbadalada xeerkani muranka dhaliyay ee shaqaalaha ayaa haatan u wareegaya gudaha baarlamaanka Faransiiska.
Xisbiyada mucaaradka ee garabka midig ayaa ku baaqay in cod kalsooni darro ah loo qaado dowladda kaddib markii ra’iisalwasaaraha uu shalay oo arbaca ahayd uu shaaciyay in xeerkaasi uu xoog ku meel marinayo iyada oo aan la soo marsiinayn baarlamaanka.
Mucaaradka ayaa la saadaalinayaa in ku dhawaad 40 cod uu ka hooseeya heerka uu ku hanan karo guusha uu u baahan yahay ee codkaasi loo qaadaya dowladda balse waxa ay haystaan taageerayaal ka tirsan xisbiga hanti wadaaga ee madaxweyne Hollande.
Xeerkani cusub ayaa wax ka badalaya arrimo Faransiiska aad looga qadariyo oo ay ka mid yihiin awoodda ururada shaqaalaha, sharciyada shaqo ka erinta shaqaalaha iyo kordhinta saacadaha shaqada ee usbuuca.
Dowladdu waxa ay sheegeysaa in ay u baahan tahay in ay fududeyso arrimaha la xiriira shaqada iyo shaqaaleysiinta, si ay shaqo abuur u sameyso.
Madaxweyne Hollande ayaa sheegay in sanadka dambe uusan xilkaasi u tartameynin haddii aanan la abuurin shaqooyin badan.
Balse haddii xitaa uu sidaa yeelo, su’aashu waxa ay tahay imisaa qof oo ka tirsan taageerayaashiisa sii yaraanaya ayuu ku luminayaa meel marinta xeerkani.